Booliska Puntland oo awaamiir amniga la xiriirta soo saaray | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Booliska Puntland oo awaamiir amniga la xiriirta soo saaray
Booliska Puntland oo awaamiir amniga la xiriirta soo saaray
Taliyaha Qeybta Booliska Gobalka Nugaal Gaashaanle Sare Maxamed aadan jaamac ayaa sheegay in degaannada Gobolka Nugaal uu dhibaato weyn ku haayo hubka sharci darrada ah ee gacanta ugu jira dadka Shacabka ah.
Taliyaha oo Warbaahinta kula hadlay Magaalada Garoowe ayaa waxaa uu sheegay in hubkaas ay fududeeynayaan in dadka si fududu loo dilo, isla markaana loo baahan yahay in arrintaasi laga hortaggo.
Sidoo kale taliyaha ayaa hadalkiisa waxaa uu intaasi ku daray n xilligaan degaannada Gobolka Nugaal aysan ka jirin baahi keeni karta in hub lagu dhex-qaato, waxaana uu laamaha Amniga faray inay ka hortagaan cid walba oo qori shari darro ah qaadata.
Warkan kasoo baxay Taliyaha Qeybta Booliska Gobalka Nugaal Gaashaanle Sare Maxamed aadan jaamac ayaa kusoo aadaya xilli dhowr jeer magaalada garoowe iyo degaannada kale ee Gobolkaas ay dhac ka geysteen Kooxo ku hubeysnaa Bustoolado iyo Mindiyo.
Previous articleDHAGEYSO:Wasiirkii hore ee shaqada Soomaaliland oo ka hadlay doorashadii dhacday
Next articleWasiirka waxbarashada oo daahfuray xeerka cayaaraha ee dugsiyada